Lalaon-tsoavaly PMU Madagasikara : Tsy ara-dalàna intsony hoy ny PMU Frantsa
Nitondra porofo. Taorian’ny famelabelarana nataon’ny ACHEL, na ny sampandraharaha manana fahefana mpikarakara momba ny soavaly ho an’ny hazakazaka sy ny fiompiana eto Madagasikara, dia namaly bontana ny PMU Madagasikara, ary nilaza fa tsy nisy porofo …Tohiny
Fampanantenan’ny Filoham-pirenena : Manomboka ny fanarenana ny tetezana Manakarabe
Araka ny fampanantenan’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, dia manomboka ny fanamboarana ny tetezana Manakarabe. Marihina fa famatsiam-bolan’ ny Fitondram-panjakana feno no miantoka ny fanamboarana rehetra, izay ny orinasa Colas no miandraikitra azy. Tetezana mirefy eo amin’ny …Tohiny
Andalana ny fahavitan’ny lalàn’ny fifidianana hoy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly, nandritra ny fanolorana ny tatitra vokatry ny fandalovan’ ny rivodoza ENAWO sy AVA teto Madagasikara. Raha ny tatitry ny praiminisitra lehiben’ …Tohiny
Antananarivo – Renivohitra : Olona telo hita faty
Lehilahy roa sy vehivavy iray no maty an-drano sy indray hita faty omaly alatsinainy. Teny amin’ny tetezan’Ampasika no nahitana ireo fatin-dehilahy miisa roa, raha toa ka teny Tanjombato no nisy ny vata mangatsiakan’ilay vehivavy fanintelony. …Tohiny